Barcelona oo xaaqday kooxda Villarreal oo marti ugu aheyd garoonka Camp Nou… +SAWIRRO – Gool FM
Barcelona oo xaaqday kooxda Villarreal oo marti ugu aheyd garoonka Camp Nou… +SAWIRRO
(Barcelona) 27 Sebt 2020. Barcelona ayaa xaaqday kooxda Villarreal oo marti ugu aheyd garoonka Camp Nou, kaddib markii ay kaga adkaatay 4-0, xilli Blaugrana ay gacanta ku dhigtay saddexdeeda dhibcood ugu horeysay horyaalka La Liga ee kal ciyaareedkan cusub 2020/21.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 4-0 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Barcelona.
Daqiiqadii 15-aad Barcelona ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 1-0 ka dhigay Ansu Fati, kaddib markii uu goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Jordi Alba.
19 daqiiqo marka ay ciyaartu aheyd Barcelona ayaa la timid gool labaad waxaana dheesha 2-0 ka dhigay Ansu Fati, xilli caawinta goolkan uu lahaa Philippe Coutinho.
Daqiiqadii 35-aad Barcelona ayaa loo dhigay rigoore waxaana gool u badelay Lionel Messi, ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 3-0 ay ku hoggaamineysay Barca.
45 daqiiqo marka ay dheeshu aheyd Barcelona ayaa sii dheereysatay hoggaanka ciyaarta kaddib markii uu gool iska dhaliyay xiddiga kooxda Villarreal, waxayna dheesha sidaas ku noqotay 4-0.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 4-0 ay kaga adkaatay Barcelona kooxda Villarreal oo marti ugu aheyd garoonka Camp Nou, Blaugrana ayaana sidaas gacanta ugu dhigtay saddexdeeda dhibcood ugu horeysay horyaalka La Liga ee kal ciyaareedkan cusub 2020/21.
Horudhac: Liverpool vs Arsenal… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka weyn ee caawa ka dhacaya garoonka Anfield)